फोटो फिचर – Page2– shubhabihani
Home / फोटो फिचर (page 2)	फोटो फिचर	यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा हट गणित शिक्षिका (फोटोफिचर सहित)
683 Views स्कुलमा पढाउनेे सुन्दर शिक्षिकाहरुमा तन्नेरी छात्रहरुको आँखा पर्नु अस्वभाविक होइन । तर एकजना शिक्षिका यस्ती छिन् जसमाथि केवल उक्त विद्यालयका छात्रहरुको मात्र होइन सबैको आँखा लागेको छ । ती शिक्षिका दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर गणित शिक्षिकाको रुपमा सोसल मिडियामा छाइरहेकी छिन् ।
विश्वका सबैभन्दा व्यस्त एयरपोर्ट, एकै फोटोग्राफरले खिचेका चकित पार्ने तस्बिरहरु
1,235 Views विश्वको बढ्दो एयर ट्राफिकको कारण एयरपोर्टमा पाइलटको लागि प्लेन टेकअफ र ल्याडिङ्ग गर्नु जोखिम पुर्णबन्दै छ। यहाँ विश्का सबैभन्दा व्यस्त एयर ट्राफिकका तस्बिरहरु छन्, जहाँ पाइटलको सानो गल्तिले पनि नतिजा कस्तो भयानक निस्कन्छ अनुमान लगाउन सकिन्छ।
लस एन्जल्सका फोटोग्राफर माइक केलीले दुई वर्षको मेहनत पश्चात आफनो फोटो सिरिज ‘Airportraits’प्रकासित गरेका छन्। विमानस्थलबाट उडेका र ल्याण्डिङ गर्न लागेका विमानहरुको एकै ठाउँबाट फरक फरक तस्बिर खिचि फोटोसप गरि एक साथ एकै तस्बिरमा देखाउने प्रयास गरिएको छ।
यो तस्बिर लस एन्जल्स स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट आर वन Lax 24l को तस्बिर हो। तस्बिर बेलुकी ५-६ बजेको बिचमा रहने एयर ट्राफिकको हो।
दुबई इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट अन्य देशको लागि उडेका विमान
लण्डन हिथ्रो पनि विश्वका सबैभन्दा व्यस्त एयरपोर्ट मध्येको एक हो। यो तस्बिर पनि बेलुकी पख लिइएको हो।
यो तस्बिर लस एन्जल्स एयरपोर्ट (LAX) को दक्षिणी रनवेबाट उडान भरेका विमानहरुको हो।
स्विटजरल्याण्सको ज्युरिक इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट फरक फरक दिशामा उडान भरेका विमान
लन्डम हीथ्रो 27l (टर्मिनल 5):हिथ्रो एयरपोर्टमा सफा मौसमको प्रतिक्षामा तीन पटक गएपछि फोटोग्राफरले खिचेका तस्बिर
हल्याण्डको एम्स्टरड्याम चिफोल अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको एनवे १८ बाट उडान भरेका विमान
दुबई को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रनवे ३० बाट उडेका विमान
जर्मनीको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जुलाई २०१५ मा खिचिएका तस्बिर
केपी वली को सपना साकार हुदै पाइपलाइनबाटै ग्यास बल्यो ! अब सिलिण्डरको के काम ? (भिडियोसहित) इमाडोलमा उद्योगमन्त्रीले यसरी गरे उदघाटन फोटो फिचर
1,312 Views ५ कात्तिक, ललितपुर । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँडेको एउटा सपना हो, सिलिण्डर युगको अन्त्य र घरघरमा पाइपबाट ग्यास ।
यसलाई धेरैले हवादारी भने र ओलीलाई मजाकको पात्र बनाए । तर, ललितपुर इमाडोलमा शुक्रबार गरिएको एउटा परीक्षणले घरघरमा पाइप लाइनबाट ग्यास पुर्‍याउन असम्भव छैन भन्ने देखाएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो करिब ३ बजेतिर उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको गाडी धुलो उडाउँदै इमाडोल पुग्यो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी पाइपलाइनबाट आएको ग्यास चुल्होमा बालेर पत्रकारलाई देखाउँदै
उनी पुग्नु अघि नै सरकारी कर्मचारी, पत्रकारदेखि सुरक्षा प्रशासनको ठूलै भिड लागेको थियो । खुला चौरमा चार इन्चको पाइप लाडिएको छ । जहाँबाट पानी तानिएको छ ।
पानीसँगै ग्यास आउने भएकाले ८२ मिटरमा पम्प पाखिएको छ । त्यही पम्प भएर पानी सेप्रेसन च्याम्बरमा पुग्छ । त्यहीँ पानीमा मिसिएको मिथेनसहितका ग्यासलाई छुट्याइन्छ । सेप्रेसन च्याम्बरबाट पानी जत्ति आउट लेट हुँदै बाहिर जान्छ भने ग्यास पाइप लाइनबाट हुँदै अर्को फिल्टर मेसिन हुँदै प्लास्टिकको पाइपमा जान्छ । त्यसलाई फिल्डर प्रक्रिया पूरा गर्दै रिजर्ब वायरमा जम्मा गरिएको छ ।
त्यसलाई घरघरमा कसरी वितरण गर्ने भनेर पनि मोडल बनाइएको छ । अहिले तीनवटा घरधुरीमा पठाउन मिल्ने गरी मिटर जडान गरिएको छ । त्यसमध्ये एक मिटरबाट लगिएको पाइपलाई एउटा टहरोमा लगिएको छ र ग्यास चुलोमा जडान गरिएको छ ।
मन्त्री जोशीले त्यही ग्यास बालेर सञ्चारकर्मीहरुलाई देखाए । बाहिर निस्कँदै गर्दा मन्त्री जोशीले भने, ‘आज हामी फेरि सफल भएका छौं । जमिनमुनिको ग्यास पाइपबाट तानेर बालियो ।’
भिडियो हेर्नुहोस् यो कसरी सम्भव भयो ?
पाइपबाट ग्याससँगै आएको पानीलाई छुट्टाउने मेशिन । जहाँबाट पानीलाई छुट्याएर ग्यासलाई मात्रै रिजर्भवायरसम्म पठाइन्छ ।
अन्तिम चरणमा फिल्टर भएको मिथेन ग्यासलाई प्रेसरको सहायतामा पाइपबाट चुल्होसम्म पुर्‍याउने मेशिन
फोटो-भिडियो- कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर
प्रचण्ड हात मिलाउदै सीता कपाल मिलाउदै ।फोटो फिचर
577 Views काठमाडौं : भारतको गोवमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा पर्यबेक्षकका रुपमा सहभागी भएर सोमबार काठमाडौं फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै रहेकी पत्नी सीता दाहालले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अनौठो व्यवहार देखाइन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा रहेका विशिष्ट अधिकारीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउँदै गर्दा सिता भने प्रचण्ड अघिअघि हिडेर कपाल मिलाइरहेको देखियो । उनको यो व्यवहारलाई स्वागतमा लागि उभिएका भीभीआइपीहरुले अनौठो मानेका थिए । केही तस्बिरहरु यहाँ हेर्नुस् ।
तस्बिरहरु : रजेन्द्र केसी।
337 Views २९ असोज, काठमाडौं । आज धुम्बाराहीको शंखपार्कमा नेकपा एमालेले गरेको चियापान कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच निर्वाचनबारे समान्य बहस भयो । पत्रकारहरुले दुबै नेतासँगै रहेका बेला प्रश्न तेर्स्याएपछि दुबै नेताले मुख खोले ।
137 Views आश्विन २७, २०७३- नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले आईसीसी महिला विश्वकप २०१७ को एसियाली छनोटमा विहीबार आयोजक हङकङमाथि ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ ।
303 Views २७ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरी पुगेर २७ हजारले दशैंको विदा मनाएका छन् । केही समयअघि देखि खुलेको केबलकार चढेर झण्डै २७ हजारभन्दा बढीले चन्द्रागिरीको यात्रा गरेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले जनाएको छ ।
758 Views आश्विन २५, २०७३- दशैं लागेपछि सुनसान देखिएको काठमाडौंको सडकमा भने मंगलबार चहल पहल देखिएको छ । सवारी साधनको सामान्य चाप छ । टीकाको दिन भएकाले बिहानैदेखि सर्वसाधारण मान्यजनकोमा ओहोर दोहर थालेपछि सडकमा चहलपहल बढेको देखिएको छ ।
1,215 Views काठमाडौँ: वडादसैंको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठमा पुगेर पूजापाठ तथा दर्शन गरेका छन् ।
654 Views २३ काठमाडौं । शरद ऋतु लागेपछि हिलो र मैलो हट्छ भन्ने कवि लेखनाथ पौड्याल अहिलेसम्म बाँचेका भए पक्कै पनि उनले ऋतुविचारमा यस्तो लेख्ने थिएनन् होला । अलिकति पानी पर्नासाथ काठमाडौंको दशा कस्तो हुन्छ ? हामीले केही तस्वीरहरु देखाउने प्रयास गरेका छौंं ।